ကိုလံဘီယာတွင် ပက်ထရို၏အနိုင်ရရှိမှုက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် အခွင့်အလမ်းဖြစ်ဟု ဗင်နီဇွဲလာအာဏာရပါတီပြောကြား - Xinhua News Agency
ဗင်နီဇွဲလား ညီညွတ်သောဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ပထမ ဒုတိယဥက္ကဌ Diosdado Cabello က ကာရာကက်စ်မြို့၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကာရာကက်စ် ၊ ဇွန် ၂၁
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတွင် ဂူစတာဗိုပက်ထရို(Gustavo Petro) ၏ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့မှုသည် နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗင်နီဇွဲလားညီညွတ်သော ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ (PSUV) ပထမဒုတိယဥက္ကဌ Diosdado Cabello က တနင်္လာနေ့တွင်ပြောကြားလိုက်သည်။“ သံသယလုံးဝ မရှိပါဘူး ၊ အခွင့်အလမ်းသစ်တစ်ခုဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုလားတဲ့ ကိုလံဘီယာအတွက် တံခါးဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သလို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ တံခါးဖွင့်လိုက်တဲ့ အခွင့်အလမ်းသစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ် ၊ အဲဒါဟာ ဗင်နီဇွဲလားနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ထိရောက်မြန်ဆန်တဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်မှာပါ” ဟု ကာရာကက်စ်မြို့၌ ပြုလုပ်သော ၎င်း၏ အပတ်စဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် Cabello က အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုလံဘီယာသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသော ပက်ထရို နှင့် သူ၏ ဒုတိယသမ္မတ Francia Marquez တို့အား Cabello ကဂုဏ်ပြုချီးကျူးစကားဆိုလိုက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်သည် သုံးနှစ်ကျော်ကြာ အေးခဲနေသည့် ကိုလံဘီယာ-ဗင်နီဇွဲလား နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံရေးအတွက် “ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ပြန်ဟပ်သည့် လက္ခဏာများ” ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ သမ္မတနီကိုလပ်စ်မက်ဒျူရို၏ အခွင့်အာဏာကို အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံနှင့် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတို့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်မှစတင်ကာ နိုင်ငံရေး နှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေးတွင် အဆိုးရွားဆုံးတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်။
သူ၏နိုင်ငံအနေဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် စိတ်ဆန္ဒရှိကြောင်းကို ရည်ညွှန်းလျက် “ ဗင်နီဇွဲလားဟာ လက်တွေဖြန့်ထားရင်း တူညီတဲ့နေရာကပဲ ဒီမှာ အမြဲတမ်းရပ်တည်နေပါတယ်” ဟု Cabello ကပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အာဏာရပါတီအနေဖြင့် “ ကိုလံဘီယာ နဲ့ ဗင်နီဇွဲလားအကြား ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို လျင်လျင်မြန်မြန် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ချက်မျိုးကိုမဆို ထောက်ခံအားပေးပါတယ်” ဟု ၎င်းက အလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
Petro’s win in Colombia offers chance for dialogue: Venezuelan ruling party
CARACAS, June 20 (Xinhua) — Gustavo Petro’s presidential win in Colombia opens up an opportunity for dialogue and restoring diplomatic relations, first vice president of the ruling United Socialist Party of Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello said Monday.
“Withoutadoubt,anew opportunity is opening up for the Colombia we all want …anew opportunity for dialogue is opening up. It radically changes the relationship with Venezuela,” Cabello said during his weekly press conference in Caracas.
Cabello, who congratulated Petro and his vice-presidential running mate Francia Marquez, said the election outcome “reflects signs of hope” foradiplomatic relationship that has been frozen for more than three years.
Venezuela severed political and diplomatic ties with Colombia on Feb. 23, 2019, after the neighboring nation refused to recognize the mandate of President Nicolas Maduro.
“Venezuela has always been here, in the same place, with open arms,” Cabello said in reference to his country’s willingness to dialogue.
He stressed the ruling party “supports any initiative to quickly restore the good relations between Colombia and Venezuela.”
Photo – The first vice president of the United Socialist Party of Venezuela, Diosdado Cabello, speaks duringapress conference, in Caracas, Venezuela, on June 20, 2022. (Xinhua/Marcos Salgado)
ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်တွင် အမေရိကန်-ကိုလံဘီယာ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ဗင်နီဇွဲလားရှုတ်ချ